COVID-19 ဒဏ်ခံရသောစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် EDA ချေးငွေများ• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
COVID-19 ကြောင့်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် EDA ချေးငွေ
အပေါ် Posted စက်တင်ဘာလ 21st, 2021
အမေရိကန်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (EDA) ရှိသည် CARES အက်ဥပဒေရန်ပုံငွေများကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည် သို့ စိန့်လူးဝစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်း (SLDC) သည် COVID-19 ကြောင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ကပ်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကုန်စည်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနေသည်။
EDA ချေးငွေများသည်စိန့်လူးဝစ်မြို့၌တည်ရှိသောအကျိုးအမြတ်လုပ်ငန်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အခွန်နှင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လိုအပ်ချက်အားလုံးတွင်လက်ရှိဖြစ်ရမည်။ ချေးငွေဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀ တိုင်းအတွက်လုပ်ငန်းသည်အလုပ်တစ်ခုဖန်တီးပြီးသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ ချေးငွေများသည်ချေးငွေအတည်ပြုချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ပြန်မအမ်းနိုင်သည့်လျှောက်လွှာကြေးဒေါ်လာ ၁၀၀၊ မူလ ၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပိတ်နိုင်သောကုန်ကျစရိတ်များရှိသည်။
ချေးငွေပမာဏသည် ၂ ရာခိုင်နှုန်းမှစတင်သောအတိုးနှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ မှဒေါ်လာ ၃၀၀,၀၀၀ အထိရှိသည်။ ချေးငွေ၏ကြာချိန်သည်ရန်ပုံငွေအတွက်သုံးသောအရာပေါ် မူတည်၍ သုံးနှစ်မှခုနစ်နှစ်အထိဖြစ်သည်။ ချေးငွေများကိုလုပ်ငန်းအရင်းအနှီးအဖြစ်သာမကစာရင်းဇယား၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အိမ်ခြံမြေများအတွက်သုံးနိုင်သည်။ ရန်ပုံငွေများကိုလက်ရှိအကြွေးများ (သို့) ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစရိတ်များပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် သုံး၍ မရပါ။
စိန့်လူးဝစ် EDA ချေးငွေအစီအစဉ်အတွက်မည်သို့လျှောက်ထားရမည်နည်း
လျှောက်ထားရန်, လျှောက်လွှာကိုဒီမှာ download လုပ်ပါမရ။ သင်၏ပြီးမြောက်သောလျှောက်လွှာနှင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀ လျှောက်လွှာကြေး (စိန့်လူးဝစ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီသို့ပေးချေပါ) တွင်
အာရုံစိုက်မှု၊ မစ္စတာ Chris Maguire
1520 Market ကလမ်း, Suite 2000
စိန့်လူးဝစ်, MO ကို 63103
မင်းရဲ့လျှောက်လွှာကိုတင်တဲ့အခါမင်းကချေးငွေခွင့်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပြန်သုံးသပ်တဲ့အခါမင်းအရာရှိနဲ့အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။ သင်၏ချေးငွေကိုအတည်ပြုပါကရန်ပုံငွေများကိုတတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာတင်ရန်ရက်အကန့်အသတ်မရှိ၊ ရန်ပုံငွေအကန့်အသတ် ရှိ၍ လျှောက်ထားသူများကိုပထမ ဦး စားပေး ၀ င်ငွေများဖြင့်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အမြန်ဆုံးလျှောက်ထားရန်သေချာပါစေ။
Dutchtown ပင်မလမ်းများ Dutchtown ရှိခိုင်မာသောအောင်မြင်သောစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအားအရင်းအမြစ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ နောက်ထပ်စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကိုသင်ရှာနိုင်သည် dutchtownstl.org/ စီးပွားရေး.
အောက်မှာ Filed Covid-19. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား နှင့် Covid-19. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် အောက်တိုဘာလ 14th, 2021 .
ဒိန်းမတ် Covid-19 COVID-19 ကြောင့်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် EDA ချေးငွေ